Fifidianana 2018 : Maro ny Malagasy noverezin-jo -
AccueilSosialyFifidianana 2018 : Maro ny Malagasy noverezin-jo
06/11/2018 admintriatra Sosialy 0
Iray andro mialoha ny hiatrehana ny fifidianana ho Filoham-pirenena isika amin’izao fotoana izao. Hatreto, mbola maro ny tsy mazava manodidina izany fifidianana izany. Mbola maro ihany koa ireo velon-taraina fa tsy tafiditra anaty lisim-pifidianana ary maro ireo tsy nahazo kara-pifidianana.
Manoloana izany indrindra, nitondra fanazavana ny teo anivon’ny Vaomiera mahaleo tena misahana na/sy mikarakara ny fifidianana (Ceni) fa tsy marina ny filazana sy ny resaka mandeha amin’izao fotoana izao amin’ny fisian’ny tsy fahatomombanana. Feno hosoka ny lisim-pifidianana ary izany indrindra no mahatonga ilay resabe sy fitakiana nataon’ireo kandidà mivondrona amin’ny firaisan’ny kandidà teo aloha teo hatramin’izao.
Nambaran’ny teo anivon’ny Ceni anefa fa ireo izay tsy tafiditra anatin’ny lisim-pifidianana eny anivon’ny fokontany, izay efa nakatona ny 15 avrily lasa teo, tsy afaka mifidy ary ireo izay tafiditra nefa tsy nahazo kara-pifidianana dia afaka mifidy amin’ny alalan’ny karapanondro. Nohamafisin’izy ireo ihany koa fa tsy marina ny filazana fa misy antotan-taratasy fenoina sy aterina eny amin’ny SRMV mba ahazoana miditra anatin’ny lisim-pifidianana. Voalaza fa izay lisim-pifidianana eny amin’ny fokontany nofaranana ny 15 avrily lasa teo ihany no lisim-pifidianana ampiasaina amin’ity fifidianana, izay tanterahina ny 7 novambra izao ity.
Teo aloha teo anefa, ny Ceni izao mihitsy no miaiky fa misy sy ahitana tsy fahatomombanana ny fikarakarana ny fifidianana ho Filoham-pirenena eo amin’ny lafiny maro, izay voalaza etsy ambony. Aty aoriana indray, mandio tena izy ireo tamin’ny alalan’ny filazana fa tsy misy hosoka ary izay mahita hosoka dia mitondra ny fanamarinana izany eny anivon’izy ireo.
Araka izany, tsy hita izay fanarenana nataon’ny Ceni mahakasika izany, eny fa na efa feno azan y kitapom-bolan’izy ireo hoenti-mikarakara sy manatanteraka ny fifidianana. Miraviravy tanana ihany koa ny Ceni tamin’ireo tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fampielezan-kevitra…
Tompon’andraikitra feno amin’izay zava-mitranga manodidina ny fifidianana ny Ceni amin’izao tery vay manta izao amin’ny fifidianana izao satria ho maro ireo Malagasy noverezin-jo.
Porofon’izany ny fitarainan’ireo sefo fokontany teo aloha teo tamin’ny fanaterana ny antotan-taratasin’ireo tsy tafiditra anaty lisim-pifidianana nefa dia nolavin’ny Ceni ny fandraisana izany. Izany rehetra izany dia manamarina fa miala andraikitra tanteraka ny eo anivon’ny Vaomiera mahaleo tena mikarakara ny fifidianana. Inona izany no tian-kahatongavana raha tsy ny hahamaro ny mpifidy ho very zo.